Ukuvuselelwa kweholide, kungasetshenziswanga ngesikhathi
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi abanye abasebenzi abasebenzisi ikhefu labo elihlelwe ngonyaka futhi banombuzo: banelungelo elingokomthetho lokufuna noma yiziphi izinkokhelo ezibonakalayo?
Qaphela ukuthi isinxephezelo seholidini, esingasetshenziswanga ngesikhathi, singafakwa kwelinye lamacala amabili. Okokuqala, sikhuluma ngokuxoshwa kwesisebenzi okwakungekho eholidini, futhi okwesibini, isisebenzi singase singasebenzisi ilungelo lakhe elingokomthetho iholide yonyaka. Ungaba kanjani kulezi zimo futhi kuthiwani ngesinqumo sezimo ezifanayo okukhulunywa ngazo emthethweni?
Uma kwenzeka ukuqedwa kwesisebenzi, umthetho ubeka ngokucacile ukukhokhelwa kwemali yesibambiso seholide engasetshenzisiwe, futhi lokhu kusebenza isikhathi sonke somsebenzi. Ngesikhathi esifanayo, ngesicelo somsebenzi oqashiwe, inkampani ayisebenzisayo ingamnika zonke izinsuku zokuhlala ezingasetshenzisiwe futhi ngemuva kokufaka irekhodi lokuxoshwa encwadini yokurekhoda yomsebenzi kanye neminye imibhalo. Ngesikhathi esifanayo, usuku lokuxoshwa akuwona usuku lokugcina olusebenzayo, okungukuthi usuku lokugcina lweholide. Le nqubo ibizwa ngokuthi "ukunikeza ikhefu ngokuxoshwa okulandelayo," noma kunjalo, le mithetho yomthetho ingasetshenziswa kuphela uma kwenzeka isicelo esibhaliwe somsebenzi osetshenzisiwe kakhulu. Kulesi simo, njengoba wazi, asikho isinxephezelo sekhefu.
Umthetho uthi umqashi olahliwe kumele athole isinxephezelo kuzo zonke izinsuku zokungabikho ngaphandle kokungabikho. Lokhu kusho ukuthi uma umsebenzi engazange aphumule iminyaka engaphezu kwengu-2, evinjelwe umthetho omusha, umqashi ubophezelekile ukukhokha isinxephezelo sonke isikhathi.
Ubala kanjani isinxephezelo sezinsuku zokuphumula? Uma kwenzeka ukuxoshwa kwesisebenzi esingakapheli izinyanga ezingu-11 ezigcwele, isikhathi sakhe sokuphumula sibalwa ngokulandela uhlelo olulandelayo: inani lezinyanga zokusebenza eziphelele liphindwe ngu-2.33 futhi sithola isikhathi sokuhamba, okufanele sinikezwe noma, ngokucela isisebenzi, sihlawuliswe. Lapho ubala izinsuku zeholide, inombolo engeyona inombolo ingabangela. Umthetho awuhlinzeki ngenqubo yokuqeda, okusho ukuthi umqashi unelungelo lokuzikhethela ngokuzikhethela ukuthi uzodinga yini noma ngaphezulu.
Uma isisebenzi sichithwa, ukukhokha isinxephezelo sekhefu akuhambisani nanoma yiziphi izintela, futhi iminikelo yempesheni nemali yomshuwalense ayiqoqiwe kuye.
Ngokusho komthetho omusha, umuntu ongashiyi umsebenzi wakhe angaba nesinxephezelo semali, okuzohlanganisa kuphela isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingu-28 zokusebenza.
Ngokuqondene nento enjengenxephezelo yabasebenzi baseholidini, kunezimo lapho kungavunyelwe khona ukukhokha imali elinganayo. Okokuqala, sikhuluma ngezigaba ezinjalo zabasebenzi njengabesifazane abakhulelwe, abasebenzi abangaphansi kweminyaka, kanye nabantu abasebenzela amabhizinisi ayingozi nabokuphila.
Uma kwenzeka umsebenzi eqhubeka nokusebenza kodwa ecela ukuthi ahlawuliswe ngekhefu, bobabili abasebenzi nabalandeli bekampani kufanele bakhumbule ukuthi isinxephezelo semali sokuphumula okungasetshenzisiwe kulokhu kubhalwa intela ngokuya kwesistimu eyodwa yentela.
Kumele kuqashelwe ukuthi ezinkontileka zokuqashwa ezinikezwe abasebenzi ezinkampanini eziningi ezinzima, inqubo yokukhokhela izinkathi ezingasetshenzisiwe ivame ukuningiliziwe.
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi ngephutha elithile umgcinisi-akhawunti ukhohlwa ukubala futhi athole isinxephezelo sokuphumula okungasetshenzisiwe. Kulesi simo, ukuze ugweme ukujeziswa, kumele kubhekise iphutha bese uzama ukukhokhela isikweletu ngisho nalabo basebenzile kakade futhi abazange basebenze ebhizinisini isikhathi eside.
"Isidleko se-Swallow". Indlela yokufika lapho ngemoto eya eYalta Castle
Apple juice: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka isiphuzo
Thina sikhule utamatisi for zokugcina kahle
Ukukhubazeka: nenqubo ngezigaba kanye degree of ukukhubazeka. Incazelo yokukhubazeka
Tretyakov Igalari ku Krymsky Val: uhlelo, ithikithi amanani, izinkomba
Iyatholakala imanyuwali yomsebenzisi DeLonghi Coffee